Gu Gu's Cyber Sandbox: Want to convert Myanmar fonts?
Want to convert Myanmar fonts?
ကိုမောင်လှရဲ့ ဘလော့ကနေရတာ၊ ပြန်ပြီး သုံးဖို့ ခွင့်ရခဲ့တာတော့ ကြာပါပြီ... အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးမှ ဘလော့ပေါ်တင်ဖို့ မေ့နေတာနဲ့ အခုမှပဲ တင်ဖြစ်ပါတော့တယ်... ဇော်ဂျီ font ကနေ ဝင်းမြန်မာကို အလွယ်တကူ ပြောင်းပေးနိုင်သလို၊ ဝင်းမြန်မာ ကနေ ဇော်ဂျီ font ကိုလဲ အလွယ်တကူ ပြောင်းယူနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ web page လေးပါပဲ... Java script ကို support လုပ်နိုင်တဲ့ browser ရှိရင် သုံးလို့ရပါပြီ...
နောက် အသုံးဝင်ပုံလေးတစ်ခုကို ရှာတွေ့ထားတာကတော့.. အဲဒီ text box လေးကို သုံးပြီး ဝင်း (သို့) ဇော်ဂျီ ကို ရိုက်ပြီး ကော်ပီကူးနိုင်တာပါပဲ... တစ်ခြား program တွေ ဖွင့်ဖို့ မလိုအပ်ပဲ browser ကနေဖွင့်ပြီး အသင့်သုံးနိုင်တာမို့ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ အဆင်ပြေလှပါတယ်...
1. Zawgyi (Zawgyi-One) to Win Converter
2. Win to Zawgyi (Zawgyi-One) Converter
3. Win to Zawgyi Converter (on the fly)
Posted by Gu Gu at 12:58 AM
ကျေးဇူးပါအစ်ကို၊ ခါတိုင်းသုံးနေကျ ဦးမောင်လှ